Igwe nrụpụta igwe mkpado kacha mma akpaka emeputa na ụlọ nrụpụta | UBL
Mmanya, Ihe ọverageụ ,ụ, Can, ite, karama ọgwụ wdg
Igwe na -akpado akpaaka Semi Automatic
Mmeghe ọrụ: A na -eji ya n'ọtụtụ waya, ogwe osisi, ọkpọ plastik, jelii, lollipop, ngaji, efere enwere ike ịwepụ, na ihe ndị ọzọ. Gbanye akara ahụ. Ọ nwere ike ịbụ akara oghere ụgbọelu.
Ọnụ ọgụgụ aha otu akụkụ n'otu oge
Ọsọ 15 ~ 40pcs/min
Nha akara Ogologo 10 ~ 60mm; Obosara40 ~ 120mm (Ntuziaka nke ogige)
Nha ngwaahịa Nwere ike ahaziri (dayameta 3mm, 5mm, 10mm wdg)
Ogo igwe na ibu ya L600*W580*H780mm; 80Kg
3.Can nwere ike tinye ngwa nbipute inkjet ma ọ bụ ngwa nbipute laser;
Ịdebanye aha ziri ezi: PLC+ akara mkpị na-ebugharị nke ọma na-eme ka o doo anya nkwụsi ike dị elu na nnyefe akara ziri ezi; A kwadebere usoro nri na ọrụ breeki iji hụ na ị na -agbatị eriri akara ahụ na nchọpụta ziri ezi nke idobe akara; Mpempe okirikiri akara mkpado nwere ike igbochi mwepu aha ma ọ bụ aka nri;
Na -adịgide adịgide: a na -ahazi ụzọ eletrik na ụzọ gas iche iche; A kwadebere ụzọ gas iji nwee ihe nhicha iji zere iru mmiri ikuku ka ọ ghara imebi ngwa eletriki, si otú a na -agbatị ndụ ndụ nke ngwa gị; Ejiri ngwa igwe aluminom dị elu na igwe anaghị agba nchara, na -ebuga ogo dị elu na ntụkwasị obi siri ike;
Ọ dị mfe ịhazigharị: mgbatị kwụ ọtọ ya na -agbanwe agbanwe, yabụ ọ bara uru maka ịkpọ ngwaahịa dị elu dị iche iche, na -enweghị mkpa ịgbanwe ihe ndozi ugboro ugboro;
Ọdịdị mara mma: nchikota nke kọmpụta etinyebere, igbe nkesa na-acha ọcha, igwe anaghị agba nchara na alloy aluminom dị elu na-enye echiche mara mma ma melite ọkwa nke ngwaọrụ ahụ;
Ndenye akwụkwọ ntuziaka / akpaka bụ nhọrọ: ndị na -arụ ọrụ nwere ike ijikwa akara site na ihe mmetụta ma ọ bụ site na stampụ; enyere bọtịnụ njikwa na akpaka; ogologo aha mmado nwere ike gbanwee na uche;
TAG: sistemụ nrịba ama nke igwe, igwe nrapado nrapado
Nke gara aga: Akpụkpọ akpaghị aka unscrambler
Osote: Igwe akara akpa kaadị
Onye na -ere waya
APPLICABLE: Igbe, katọn, akpa plastik wdg Igwe igwe nha: 3500*1000*1400mm ụdị DRIVEN: VOLTAGE eletriki: 110v/220v USAGE: igwe nrapado ụdịdị: igwe nkwakọ ngwaahịa, igwe na-ebipụta akwụkwọ katọn ngwa ngwa UBL-T-305 Ngwa a bụ maka katọn buru ibu ma ọ bụ nrapado kaadiboodu maka mmepe, nwere isi aha abụọ, nwere ike tinye otu aha abụọ ma ọ bụ aha dị iche iche n'ihu na azụ na th ...
Ọkara akpaka akụkụ abụọ karama akpọrọ mac ...
Ngwa ngwa UBL-T-102 Semi-akpaka akụkụ igwe nwere akara karama dabara adaba maka otu akụkụ ma ọ bụ akara akụkụ abụọ nke karama square na karama ewepụghị. Dị ka mmanụ mmanye, iko dị ọcha, mmiri ịsa mmiri, ncha ntutu, gel ịsa, mmanụ a ,ụ, reagent kemịkalụ, mmanụ olive, jam, mmiri ịnweta mmiri, wdg ...
Igwe nyocha akara, Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama mmanya, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama biya,